हातमा पैसा टिक्दैन ? यस्ता छन कारणहरु – Sandesh munch
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र १३, २०७७ समय: १४:३१:१६
तपाई पैसा नजोगिएर हैरान हुनुभएको होला ? कमाइको र खर्चको तालमेल नमिल्दा समस्या भोग्नेहरु धेरै हुन्छन् ।
देखिने र ठूलो खर्च गर्ने स्थान पनि हुँदैन तर साथमा पैसा बचत पनि नहुँदा धेरै मानिसले मेरो हातमा त पैसा नै टिक्दैन भन्ने पनि गरेका छन् ।
यस्तो समस्या तपाईले पनि भोग्नु भएको छ भने यि उपाय काम लाग्न सक्छन् ।
पहिला खर्चको लिस्ट बनाउनुहोस्
सानोदेखि लिएर ठूलो खर्चसम्मको एउटा लक्ष्य बनाउनुहोस् । यो लक्ष्य पूरा गर्न प्रयास गर्नुभयो भने बारम्बार हुने खर्चमा नियन्त्रण हुन सक्छ र यसले आम्दानी र खर्चबीच एउटा सन्तुलन पैदा गर्छ ।
जस्तै तपाईंलाई गाडी किन्नु छ, घर बनाउनु छ या बिहे गर्नुछ भने यी कुराहरू लेख्नुस् । कुनै खर्च गर्नुभन्दा अगाडि आफूले राखेका लक्ष्यहरूलाई सम्झिने प्रयास गर्नुस् । लक्ष्य अगाडि भएपछि वचत गर्न सजिलो हुन्छ ।
क्रेडिट कार्डको खर्चमाथि नियन्त्रण
केही मान्छेहरू आफ्नो खर्चका लागि क्रेडिट कार्डमा निर्भर हुन्छन् जुन खराब बानी हो । खर्च गर्न क्रेडिट कार्डमाथि निर्भर रहनु भनेको वचत हुन कठिनाइ हुनु हो । क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्नुपरेमा त्यतिमात्र खर्च गर्नुस् जति तपाईंको बैंक एकाउन्टमा पहिल्यैदेखि वचत छ । एक महिनामा जति तिर्न सकिन्छ त्यति मात्र क्रेडिट कार्डबाट खर्च गर्नुपर्छ ।
आफूमाथि कुनै पनि किसिमको ऋण राख्नु हुँदैन । कहींबाट ऋण लिएको छ भने त्यसलाई छिटै तिर्ने कोशिस गर्नुपर्छ । यदि तपाईंसँग कहीं बाट पैसा आउँदै छ र तपाईंले घर या गाडी किन्न खोज्नुभएको छ भने त्यसलाई रोकेर आफ्नो ऋण तिर्नतिर लाग्नुहोस् ।
आपतकालीन कोष बनाउनुहोस्
वचतसँगै वित्तीय सुरक्षाको पनि ध्यान राख्न जरुरी छ । तपाईंले आफ्नो लागि सबैभन्दा पहिला आपतकालीन कोष बनाउनुहोस्, यसो गरियो भने कुनै अप्ठेरो परिस्थितिमा त्यो पैसा तपाईंले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । इमर्जेन्सी फण्ड भएपछि तपाईंलाई ऋण लिन आवश्यक नपर्न सक्छ ।